Thenga kwi-Intanethi | Umbutho wokuKhuthaza iNkcubeko yeWadi
Xa usiza kwiprojekthi exhaswa ngumbutho, nceda ujonge "Malunga nemizamo yombutho yokuthintela ukusasazeka kosulelo ngexesha lokusebenza" kunye "nezicelo kuye wonke umntu oza kwintsebenzo" ngaphambi kokuba uze kwindawo.
Malunga neenzame zombutho zokuthintela ukusasazeka kosulelo ngexesha lokusebenza
Isicelo kuwo wonke umntu oza kwintsebenzo
Ifumaneka iiyure ezingama-24 ngosuku. (Ngaphandle kwexesha lokulungisa ukususela ngo-3: 4 ekuseni ukuya ku-XNUMX: XNUMX ekuseni)
Ubhaliso lobulungu luyafuneka kwangaphambili ukusebenzisa le nkonzo.
Ngezihlalo ezigciniweyo, unokukhetha inombolo yakho oyithandayo.
Nceda uqhubeke kwezi zinto zilandelayo kwiphepha lokuthengisa kwi-Intanethi.
I-Ota yeWadi yeNkcubeko yokuKhuthaza uMbutho kwiMigaqo yokuSebenzisa (2021)
Ikhadi letyala (i-VISA / Master / i-JCB / i-AMERICAN EXRESS / i-Diners Club)
Imali (kuphela xa ufumana amatikiti kwiFamartMart)
Uyifumana njani itikiti?
・ Ukubhuka kunokwenziwa de kube yi-19: 00 kusuku olungaphambi komdlalo.
Akukho kubhaliswa kusetyenziswa inkonzo yeTikiti MOALA.
Itikiti le MOALA
・ Ungajonga ulwazi lokuthenga kwiPhepha lam kwiTikiti le-Ota Ward leNkampani yokuPhucula iNkcubeko.
URL I-URL yolwazi lwetikiti iya kuthunyelwa kwidilesi ye-imeyile (i-smartphone) ebhaliswe kwiveki enye ngaphambi kokusebenza.
Kuya kuhlawuliswa imali eyahlukileyo ye-yen eyi-150 kwitikiti ngalinye.
* Iifowuni eziphathwayo kunye neepilisi ngaphandle kwee-smartphones azinakusetyenziswa.
Operate Nceda usebenze "kwiFami Port" efakwe evenkileni kwaye uyichole kwirejista yemali.
Inani elingu-1 (ikhowudi yenkampani "30020") Kwaye inombolo yesibini (inombolo yotshintshiselwano (amanani ali-2 aqala nge-8)) ayadingeka.
Cofa apha ukuze uyisebenzise irisithi yeFamilyMart
・ Ukubhuka kunokwenziwa ukuya kuthi ga kwiiveki ezi-2 ngaphambi komhla wentsebenzo.
Deliver Sizakuyihambisa ngoThutho lwe Yamato.
You Ukuba awukho, kukho inkonzo yokuphinda ubuyise enomhla nexesha.
Ukongeza kwintlawulo yetikiti, kuya kuhlawuliswa umrhumo we-yen ezingama-450 kwitikiti ngalinye.
Amatikiti akanakutshintshiselana, atshintshwe okanye abuyiswe.
Amatikiti akasayi kuphinda akhutshwe phantsi kwazo naziphi na iimeko (ezilahlekileyo, ezitshileyo, ezonakeleyo, njl.njl.).
Ngokomgaqo, indlela yokwamkela egqitywe ngexesha lokuthenga ayinakutshintshwa.
Ukuhanjiswa kwasekhaya kuphela.Asithumeli phesheya kolwandle.
Ukuba awufumani ukuthunyelwa kwe-imeyile ngokuzenzekelayo kwinkonzo yamatikiti ekwi-Intanethi Ukuhanjiswa okuvela kwiseva yeziko ledatha kunokugwetywa njenge-imeyile eyingxubevange.Nceda ujonge kwezi ndlela zilandelayo zendlela yenkxaso.
Usebenzisa njani amatikiti akwi-Intanethi
Nceda ujonge le vidiyo ilandelayo ngendlela yokubhalisa kunye nokuthenga amatikiti akwi-Intanethi.
Ungabhalisa njani njengelungu letikiti elikwi-Intanethi
Ungalithenga njani itikiti elikwi-Intanethi
Isaziso malunga nothintelo lokuthengiswa kwakhona kwamatikiti
Malunga nokuthintelwa kokubuyiselwa kwamatikiti